Miaramila Shinoa: Mandihy Amin’ilay Hira Malaza ‘Little Apple’ (Paoma Kely) Mba Handresena Lahatra Ny Olona Hanao Raharaha Miaramila · Global Voices teny Malagasy
Miaramila Shinoa: Mandihy Amin'ilay Hira Malaza ‘Little Apple’ (Paoma Kely) Mba Handresena Lahatra Ny Olona Hanao Raharaha Miaramila
Voadika ny 09 Aogositra 2014 16:52 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, polski, Español, English
Ny Ministera Shinoa misahana ny Fiarovana no farany indrindra nanandrana ny fakàn-tahaka an'ilay lahatsarin-kira “Little Apple”, nosoran'ny sasany ho toy ny “Gangnam Style” any Shina, fa amin'ny endrika mandrisika ny olona hirotsaka ho miaramila.
Ilay lahatsary, izay navoaka tamin'ny 17 Jolay, dia ahitàna fiaramanidina sy bala afomangan'ny tafika, hita ao anatin'ilay lahatsary niaingàna hatraminà miaramila mandihy.
Charle Liu avy amin'ny Nanfang.com no nandika ny tonony. Hoy ny rodobe hoe:
Tsy misy voninahitra lehibe indrindra mihoatra noho ny fidirana ao amin'ny tafika
Satria mijoro tsy azo hozongozonina ny nofinofy
Midika izany fa sarobidy loatra izy
Afaka mioty tanjona faran'ny ambony
Manana ny nofinofiny ny tanora tsirairay avy
Manana ny voninahiny mamiratra ny nofinofy tsirairay avy
Lahatsarin-kira novokarina sy nohirain'ny Chopstick Brothers (Xiao Yang sy Wang Taili) ny “Little Apple” mba hampahafantarana ilay sarimihetsika “Old Boys: The Way of The Dragon / Tovolahy Be Taona: Ny Fomban'ny Dragona.” Ilay lahatsary dia fakàn-tàhaka misary adala an'ireo tantaram-pitiavana toy ny an'i Adama sy Eva ary ireo mpivady nangirifiry noho ny fisarahana nateraky ny ady tany Korea. Ny media sasany niantso ny “Little Apple” ho toy ny valintenin'i Shina amin'ilay “Gangnam Style” an'ilay Koreana K-Pop.
Ny tonony iaraha-miredona ao amin'ilay hira, nadika ho amin'ny teny Anglisy, dia manao hoe:
Paoma keliko ianao
Ny haben'ny fitiavako anao, tsy mbola ampy
Tsiky mena midorehitra manafàna ny foko
Mandrehitra ny afo afo afo afon'ny fiainako
Toy ireo rahona tsara tarehy indrindra eny amin'ny lanitra
Tonga indray ny lohataona.
Ao anatin'ny fotoam-pivelarany ireo voninkazo eny an-tehezan-tendrombohitra
Ho tanteraka ireo fanantenana novolena.
Misy lahatsary arahan'ny dikany amin'ny fiteny Anglisy ary hiraina amin'ny teny Anglisy azo alaina ao amin'ny YouTube.
Hatramin'ny nivoahany tamin'ny May, nahasarika famoronana hetsika tselatra sy “pasoka daomy” marobe ilay lahatsary. Angamba ny iray fanta-bahoaka indrindra amin'ireny dia ny fisariana adàla amin'ny anaran'i Kim Jong-Um — ilay mpitarika an'i Korea Avaratra miaraka amin'ny lohan'i Osama Bin Laden sy ny an'ny Barrack Obama, filoha amerikana ataingina eo ambonin'ny an'ireo mpandihy misy ao anatin'ilay lahatsary.
Voalaza fa nanafintohina an'i Korea Avaratra ilay lahatsary, izay Shinoa mpiserasera anaty aterineto no namokatra azy. Ny gazety Koreana Chosun Ilbo nitatitra fa “tezitra mafy” ny governemanta ary nangataka an'i Shina handràra ilay lahatsary tsy hiparitaka. Nandà ny governemanta Shinoa, sady nahasarika ny sain'izao tontolo izao mihitsy ilay tantara sy ilay lahatsary.
Tafakatra ho amin'ny toerana voalohany tao amin'ny Fandaharan-kiran'ny CCTV ho an'ny hira manerantany nandritry ny herinandro maro ilay lahatsary “Little Apple” niaingàna. Tsy ny rehetra akory no mankafy azy — ny kiana sasany namaritra ilay hira ho toy ny fakon-javatra miaraka aminà “fanasàna atidoha” amin'ireo mozika averimberina ao anatiny.
Fa ho an'ilay dika nataon'ny tafika Shinoa indray, ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra ao amin'ny media sosialy dia manipika fa mba hamoronana endrika miaramila mahafatifaty ka hiantsoana ny tanora hiditra ao amin'ny tafika no tian'ny mpitandro filaminana hahatongavana amin'ilay izy. Mbola sarotra ny hilaza hoe nahomby na tsia ilay tetika, saingy asehon'io kosa hoe hatraiza ny hakivian'ireo Shinoa manampahefana ara-politika mpanao fampielezankevitra tamin'ny tsy nahitàny fomba hakàna ny fon'ireo andian-taranaka tanora.
Taokanton'ny làlana atao hetsipanoherana ao Kazakhstana, lasa mahazatra